Shania Twain, Jessica Biel… nanambady ny namany akaiky
Ohatrinona no maka an-dry Beyonce, Mariah Carey… ?
Fanontaniana isan’ny manitikitika indrindra ny vola omena ho karaman’ireo mpanakanto malaza any am-pitan-dranomasina any, raha te haka azy ireo hanolotra seho iray. Efa azo vinaina aloha fa tena lafo ny vola omena azy ireo vao mandeha izy nefa misy ihany koa ny fotoana, hantanterahin’izy ireo seho maimaim-poana rehefa hanolo-tanana izy.
Meghan Markle sy William : Ny zava-niafina tamin'ny niandohan’ny fihaonan’izy ireo
Tapaka tanteraka ny fifandraisana nisy teo amin’i William sy Harry.
Simon Cowell : Nahiditra hopitaly
Nahiditra hopitaly ny sabotsy 8 aogositra lasa teo ilay mpanakanto Simon Cowell, fantatra amin’ny toerana maha- mpamorona sy mpitsara azy ao anatin’ilay fifaninanana “American Got’s Talent”.
Adèle : Nanazava ny antony nanaovany régime
Tato anatin’ny volana vitsy dia very 45 kg i Adèle. Toa nahatonga saina sy nanamarika ny fiainany ny fisarahany tamin’i Simon Konecki, rain-janany.
Betsaka ireo mametra-panontaniana hoe : hatraiza ny fetran’ny finamanana eo amin’ny lahy sy ny vavy. Ny an’ireto olo-malaza ireto aloha dia lasa tantaram-pitiavana mihitsy ary tonga hatrany amin’ny fanorenana tokantrano.
Jessica Biel sy Justin Timberlake
Naka fotoana mihitsy i Justin Timberlake vao nangataka an’i Jessica Biel ho vadiny, nefa tena nanana toerana manokana tao am-pony ilay tovovavy. Tao anaty fahitalavitra izy no namboraka ny fitiavany an’ity namany akaiky lasa vadiny ity.
Nanambady ny namany akaiky i Shania Twain ary nahafaly azy tokoa izany. Tany amin’ny taona 2011 izy ireo no nifanaiky. Nahafaly azy ireo ny mifampizara fifaliana sy fahoriana .
Hatramin’ny taona 2009 dia mifankatia fatratra amin’i Dave Bugliari i Alyssa Milano. Toa mora foana izany fiarahan’izy ireo izany, satria malalaka ny fifampiresahana sy ny fifankahazoana.